GABILAY: Xildhibaano Gole Deegaan Oo Gudbiyey Mooshin Xil Ka Qaadis Ah
(Hadhwanaagnews) Wednesday, July 11, 2018 18:09:14
Xildhibaano Gole Deegaan Oo Gudbiyey Mooshin Xil Ka Qaadis Ah
Gabiley(HWN):-Xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Gabiley ayaa sheegay inay gudbiyeen codsi ay ku doonayaan in la qabto fadhi aan caadi ahayn oo ay yeeshaan golaha deegaanka degmadaasi.
Xildhibaanadan oo la hadlay warbaahinta ayaa soo bandhigay codsiga ay u gudbiyeen maayarka magaalada Gabiley, kaas oo ay ku doonayaan inuu mudanayaasha iskugu yeedho fadhi aan caadi ahayn.
“Maanta oo bishu tahay 11/07/2018 waxaanu maayarka magaalada Gabiley u dhiibnay codsigii aanu ku doonaynay inuu noogu qabto fadhi aan caadi ahayn oo aanu xilka kaga qaadayno, warqadii wuu naga aqbalay waxaanan rajaynaaa inuu mudo sadex cisho ku qabto fadhiga, badhasaabkiina waanu u dhibnay warqadii, wasaarada arimaha
gudahana waanu gaadhsiinaynaa sida uu sharcigu yahay.”ayuu yidhi xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka Gabiley.
Sidoo kale xildhibaan kale oo ka tirsan golaha deegaanka gabiley ayaa waxa uu yidhi “Waxa ilaahay mahadii ah mar haddii aanu maanta faraha ka saarnay waraaqdii aanu ku dalbanaynay kal fadhiga aan caadiga ahayn kaas oo xilka lagaga qaadi doono maayarka gabiley xilka uu u hayo umada.”
Sidoo kale xildhibaano kale ayaa si weyn u taageeray talaabada xilka lagaga qaadayo maayarka magaalada Gabiley, kaas oo haatan laga sugayo inuu mudeeyo wakhtiga la qabanayo kal fadhiga aan caadi ahayn ee lagaga soo horjeedo.